Mpanamboatra sy mpamatsy volo mangatsiaka kokoa - China Vacuum cooler Factory
Sakafo masaka Vacuum Cooler
Famaritana fohy momba ny vacuum ho an'ny sakafo vonona
Famaritana ny Vacuum cooler
Ny fampangatsiahana vacuum dia fomba mety hampangatsiahana compost manokana, miasa amin'ny alàlan'ny etona haingana amin'ny rano avy amin'ny zezika sasany eo ambany faneren'ny atmosfera ambany dia ambany ao anaty efitrano fantsona. Ny angovo miendrika hafanana dia takiana mba hanovana ny rano avy amin'ny ranona ho lasa etona toy ny amin'ny rano mangotraka. Amin'ny fihenan'ny tsindry amin'ny atmosfera ao anaty efitrano fantsom-bovoka dia mangotraka amin'ny ambany noho ny mari-pana mahazatra.
Cooler Vacuum voninkazo
Ny fampangatsiahana vacuum dia fomba iray tsara hampangatsiahana voninkazo voapaika vaovao, miasa amin'ny fitrandrahana rano haingana avy amin'ny voninkazo sasany eo ambany faneren'ny atmosfera ambany dia ambany ao anaty efitrano fantsona. Ny angovo miendrika hafanana dia takiana mba hanovana ny rano avy amin'ny ranona ho lasa etona toy ny amin'ny rano mangotraka. Amin'ny fihenan'ny tsindry amin'ny atmosfera ao anaty efitrano fantsom-bovoka dia mangotraka amin'ny ambany noho ny mari-pana mahazatra.
Ny fampangatsiahana vacuum dia fomba iray tsara hampangatsiahana anana manokana, miasa amin'ny alàlan'ny etona haingana amin'ny rano avy amin'ny ahitra sy zana-kazo ambanin'ny tsindry ambany aorian'ny atmosfera ao anaty efitrano fantsona. Ny angovo miendrika hafanana dia takiana mba hanovana ny rano avy amin'ny ranona ho lasa etona toy ny amin'ny rano mangotraka. Amin'ny fihenan'ny tsindry amin'ny atmosfera ao anaty efitrano fantsom-bovoka dia mangotraka amin'ny ambany noho ny mari-pana mahazatra.
Ny fampangatsiahana vacuum dia fomba iray tsara hampangatsiahana holatra manokana, miasa amin'ny alàlan'ny fanimbana haingana ny rano avy amin'ny holatra sasany noho ny faneren'ny atmosfera ambany indrindra ao anaty efitrano fantsona. Ny angovo miendrika hafanana dia takiana mba hanovana ny rano avy amin'ny ranona ho lasa etona toy ny amin'ny rano mangotraka. Amin'ny fihenan'ny tsindry amin'ny atmosfera ao anaty efitrano fantsom-bovoka dia mangotraka amin'ny ambany noho ny mari-pana mahazatra.
Ny fampangatsiahana vacuum dia fomba tena tsara hampihenana turf voafaritra manokana, miasa amin'ny fitrandrahana rano haingana avy amin'ny turf sasany eo ambany tsindry ambany indrindra amin'ny atmosfera ao anaty efitrano fantsona. Ny angovo miendrika hafanana dia takiana mba hanovana ny rano avy amin'ny ranona ho lasa etona toy ny amin'ny rano mangotraka. Amin'ny fihenan'ny tsindry amin'ny atmosfera ao anaty efitrano fantsom-bovoka dia mangotraka amin'ny ambany noho ny mari-pana mahazatra.
Inona ny fihenan-tsakafo?
Dingana 1.Mamando ny hamandoana avy ao anaty ny vokatra.
Dingana 2. esory ny angovo amin'ny endrika hafanana amin'ny vokatra vaovao.
Dingana 3. Ataovy mahatratra ny tampon'ny sy ny votoatin'ny vokatra
mari-pana mitovy aorian'ny fihenan'ny banga.
Legioma mangatsiaka kokoa
Inona no cooler banga?
ny teknolojia fampangatsiahana banga dia tsy mitovy amin'ny fitaovana fampangatsiahana mahazatra, fitaovana fanodinana mangatsiaka izy io, miaraka amin'ny tombony hainganana haingana, fanamiana ary madio. Ny fihenan'ny maripana amin'ny alàlan'ny cooler vacuum dia azo avy amin'ny fandroahana rano haingana rehefa ampidinina paompy banga ny tsindry atmosfera ao anaty efitrano. Amin'ny ankapobeny, maharitra 30 minitra fotsiny vao hahatratra ny mari-pana fitehirizana optimum tokony ho 5 degre.